Beautiful Horn of Africa: Farsamoyaqaankii Naftiisa Khayaanay
Nin farsamayaqaan ah oo taqasus dheer ulahaa faryaamada iyo dhismaha guryaha ayaa wuxuu gaadhay xilligii uu geli lahaa hawlgabnimo da’ lasoo deristay awgeed. Qoladii uu ushaqeynaayey ayuu ku wargeliyey in uu shaqada ka fadhiisanayo maadaamo uu cagacageynaayo da’ aad u weyn isla markaana uu doonaayo in inta ka hadhay cimrigiisa uu ku noolaado deganaansho iyo raaxo aan rabash lahayn. Waxa keliya ee uu tebi goortuu shaqada ka fadhiisto ayaa waxay ahayd lacagta mushaharada ee uu qaadan jiray si aan kalago’ lahayn.
Qoladii uu ushaqeynaayey ayaa waxey ka codsatay, kana dalbatay in mar keliya uu guri u dhiso intaa uusan shaqada ka fadhiisan. Farsamayaqaankii wuu ka aqbalay codisgoodii inkastoo uu ku wargeliyay in shaqadaasi ay noqon doonto shaqada ugu dambeysa ee uu faraha la gelaya kadibna uu shaqada ka ruqseysan doono ayadoo soo laabasho dambe aysan jiri doonin.
Maadaama uu niyadda ku hayey aayatiin wacan iyo nolol barwaaqo leh oo dambe, farsamayaqaankii ma uusan siin wax tixgelin ah shaqadii la faray. Wuxuu noqday qof maankiisa maqanyahay oon wax kala ogeyn. Wuu gaabiyay oo xirfaddii lagu yaqiin ayuu sahwiyay. Si qalqaloocan ayuu hawshan dambe ufarsameeyay. Micnaha wax dareen ah ama jaceyl uma uusan hayn. Mar un iska dhammeystir oo dedeji ayuu islahaa. Qalabka uu wax ku dhisayey ayaa wuxuu ahaa mid tayo xun. Waa nasiib darro in gebagebadii shaqada uu si xun uqabtay asagoo fiiro gaar ah siin oo aan ka baarandegin wuxuu falayey.
Hawlihii guri dhiska markuu bogay, ayuu wacay qoladii si uu guriga isaga wareejiyo. Qolooyiinki markey yimaadeen, ayey ku wareejiyeen waraaqo muujinaya in asaga milkile ka yahay guriga. Waxaa loo siiyay abaalmarin ahaan maadaama uu shaqo wanaagsan soo qabtay intuu qolyahaasi uu shaqeynayey. Waxaana lagu yidhi goortii waraaqaha lagu wareejinayey, “kan waa gurigaaga, waana haddiyad.”
Farsamayaqaankii wuu naxay wuxuuna isu arkay inuu fadeexoobay. Keliya hadduu ogaan lahaa guriga uu dhisayey in uu yahay gurigiisa, wuxuu sammeyn lahaa dadaal dheeri ah oo wuxuu taagi lahaa guri aan dunidan lagu arag ama abidkiis uusan dhisin.
Hawlaheenna adduun waxaa lagu matali karaa shaqada farsama yaqaankan oo kale. Allaah wuxuu dunidani noo keenay in aan caabudno sifa guryo aan dhaxalno uu jannada nooga sameeyo. Haddaba, waa inaan udiyaargarownaa sidaan ku hantiyi lahayn jannooyiin iyo guryo kuyaal meel aan lahayn geeri iyo rafaad dambe.
Posted by Adan Makina at 10:28 PM